Hiran State - News: M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa
M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa
HS:-M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa iyo wafi ka socda kooxda u qaabisan ololahiisa oo safaro kala duwan ku tagaya dhawr wadan oo iskugu jira bariga dhexe, Asia iyo Afirca.
Warar xaqiiqda u dhaw oo inaga soo gaarayey saacadahii ugu danbeyey qaar ka mid ah gudiga qaban qaabada ololaha Prof Warfaa ayaa sheegaya in uu dib u bilaawday ololahii musharaxnimo ee madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa iyo teamkiisa. Professor Warfaa oo sida ay qirsan yahiin Somali badan amar ilaahey mahane inuu noqon doono madaxweynaha Somaliya doorashada inagu soo aadan ayaa isaga iyo teamkiisa u kala jiheysanaya safaro kala duwan.
Safaradan ayaa lagu micneeyey kuwo ku qotoma dhinaca diplomasiyada. Prof Warfaa oo ololahiisa ka bilaabay shacabka Somaliyeed ee gudaha iyo dibada ku nool bartamahii sanadkii ina dhaafay, safarana ku tagay wadamo badan oo ay ku nool yahiin jaaliyadaha Somalida ee qurbaha ku nool ayaa hada sida lagu soo waramayo wajigiisa labaad ee ololaha u weecinayo dhinacaas iyo wadamada daneeya arimaha Somaliya iyadoo safarkani uu qaadan doono mudo aan si rasmi ah loo cayimin.
Dhinaca kale safarka Madaxweynaha mustaqbalka waxaa dhinac socda mid kale oo ay iyaguna dhawr wadan ku tagi doonaan qaar ka mid ah teamka sidaweyn ula shaqeeya Professorka oo dhawr wadan ku kala nool. inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn shaqada ay u safrayaan hadane wararka qaarkood waxey shegayaan iney qiimeyn ku soo sameynayaan amaba diyaarinayan xarun weyn oo laga maamulo ololaha madaxweynaha mustaqbalka Somaliya mudada uu ku guda jiro doorashada soo socota.
Hadaba waxaanu si joogto ah ugu soo gudbineynaa bulshada Somaliyeed hadba heerka uu marayo safarada musharaxa amaba madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof ahmed Muumin Warfaa iyo Teamkiisa. safarka madaxweynaha mustaqbalka Somaliya ayaa lagu soo waramayaa inuu ka bilaban doono wadanka Isku taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo la sheegay inuu kula kulmi doono masuuliyiin ka kala socota dhawr wadan (ma hubno) waa wararka saacadahii ugu danbeyey ina soo gaarayo.
Professor Warfaa oo wareysi dhinacyo badan taabanaya Radio Dalmar siiyey maalmo dhaweyd ayaa si rasmi ah u sheegay inuu dib u bilaawday ololahoodii uuna booqasho ku tagi doono dhawr wadan oo uu ka xusay bariga dhexe halka loo maleynayo inuu Africane tago mudada u ku guda jiro safarkaan.
La soco safarka madaxweynaha mustaqbalka had iyo jeer
· admin on October 30 2011 10:44:53 · 0 Comments · 2267 Reads ·
14,605,529 unique visits